कसरी शपर उत्पादन रेटिंगले एड्वर्ड्स व्यापारीहरूलाई असर गर्छ Martech Zone
कसरी शपर उत्पादन रेटिंग्सले एड्वर्ड्स व्यापारीहरूलाई असर गर्छ
बिहीबार, मार्च ० 12, २०२० शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० स्कट डोनाल्ड
Google ले जुलाईको अन्तमा एड्वर्ड्स फिचर ल्यायो शॉपर्सलाई अधिक जानकारी खरीद खरीद निर्णय गर्न मद्दत गर्न। Google.com मा र उत्पादन लिस्टिंग विज्ञापन (PLA) गुगल किनमेल अब उत्पादन वा गुगल किनमेल रेटिंग्स हुनेछ।
अमेजनलाई सोच्नुहोस् र वास्तवमा तपाईले यो देख्नु हुनेछ जब तपाई गुगलमा उत्पादनहरू र सेवाहरू खोजी गर्नुहुन्छ। उत्पाद रेटिंगले समीक्षा गणनाको साथ--तारे रेटिंग प्रणाली प्रयोग गर्दछ।
मानौं तपाईं नयाँ कफी निर्माताको लागि बजारमा हुनुहुन्छ। जब तपाइँ उत्पादनको लागि गुगल खोजी गर्नुहुन्छ, नतिजाले तपाईंलाई उपलब्ध उत्पादनहरूको सूची प्रदान गर्दछ साथै तिनीहरूको मूल्या and्कन र समीक्षा गणनाहरूको साथ। यो नयाँ गुगल विज्ञापन सुविधा यस समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पसलहरूको लागि उपलब्ध छ।
कसरी उत्पाद रेटिंग्स को दुकानदारहरु लाई मद्दत
खरीददारहरूको लागि, लाभ एकदम स्पष्ट छ। रेटिंग्सको साथ कुशलताका साथ उत्पादनहरू र सेवाहरू अलग गर्न, खरीद निर्णयहरू अधिक जानकारी दिईन्छ र छिटो अन्तिम रूप लिन सकिन्छ। अन्य उपभोक्ताहरूसँग कसरी एक निश्चित उत्पादन भाडा अनुमान गर्न खरीददारहरूले सबै समीक्षाको माध्यमबाट जानु पर्दैन।
आलोचनात्मक जानकारी जसले पसलहरूलाई निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ फेला पार्न सजिलो छ। उपभोक्ताहरूको अर्को खोजी गर्न आवश्यक छैन किनकि उत्पादन समीक्षाहरू त्यहाँ नयाँ उत्पादन विज्ञापन विज्ञापनमा छन् र नयाँ AdWords सुविधालाई धन्यवाद।
कसरी उत्पादन रेटिंग्स व्यापारीहरु लाई असर गर्छ
नयाँ AdWords सुविधाले किनमेल गर्नेहरूको लागि भन्दा बढि, उत्पाद मूल्याtings्कन व्यापारीहरूलाई धेरै तरीकाले उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। रेटिंग्स उत्पादन र सेवाहरू Google खोजमा अलग सेट गर्नका साथ, उत्पाद सूचीबद्ध विज्ञापनले व्यापारीहरूको लागि अधिक योग्य यातायात उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। बीटामा प्रारम्भिक परीक्षणहरूले उत्पादन सूची विज्ञापनमा क्लिक-थ्रु-दरहरूमा पनि १० प्रतिशतको वृद्धि देखाउँदछ।
थप वर्णन गर्न, हामी हाम्रो कफी निर्माता उदाहरणमा फर्कौं। Google.com वा गुगल शपिंगमा आईटम खोजी गर्दा, किन खरीददारहरूले देख्नेछन् प्रायोजित किनमेल परिणामहरूको सूची हो। एक आईटमसँग २230० प्रयोगकर्ता समीक्षाको साथ चार-स्टार रेटिंग हुन सक्छ। 4.5२3,427 समीक्षा र यस्तै अन्य XNUMX. star-स्टार रेटिंगको साथ अर्को। गुगलले आइटमहरू बिच्छेद गर्दछ सर्वाधिक लोकप्रिय र मानिसहरु पनि विचार.
जब खरीदारहरूले रेटिंगहरूमा क्लिक गर्छन्, तिनीहरूलाई नयाँ विन्डोमा पुनः निर्देशित गरिन्छ जहाँ रेटिंगको बारेमा बढि विवरणहरू छन्। गहन रिपोर्टमा ग्राहक सेवा, दावी ह्यान्डलिंग, छुट, लागत, खरीद सहजता, वेबसाइटको गुणवत्ता र निश्चित रूपमा, समग्र सन्तुष्टि जस्ता विवरण समावेश हुन सक्छ। यस विन्डोमा समावेश गरीएको छ एक व्यापारी को होमपेज एक लिंक को लागी संभावना बढाउन को लिंक।
एडवर्ड्स उत्पादन रेटिंग्स, संक्षेपमा, व्यापारीहरूले सीटीआर प्रतिशत र अन्तत: नाफा बढाउँदा प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन अर्को तरिका प्रस्ताव गर्छन्।
जहाँ Google डाटा प्राप्त गर्दछ
गुगल खरीदारी रेटिंग्सको साथ निर्णय गर्न खरीदारहरूलाई मद्दत गर्दै तपाईंको उत्पादको प्रदर्शन र CTR बढाउँदा सबै राम्रो हुन्छन्। तर रेटिंग कति वास्तविक छ? रेटिंगका लागि डाटा कहाँबाट आयो?
Google को अनुसार, उत्पाद मूल्या्कन धेरै स्रोतहरूबाट रेटिंग र समीक्षा डाटाको एक संकलन हो। रेटि ,हरू व्यापारीहरू, प्रयोगकर्ताहरू, तेस्रो पार्टी एग्रीगेटरहरू र सम्पादकीय साइटहरू सँगै मिलेर उक्त रेटिंगको समग्र प्रतिनिधित्व देखाउन आउँदछ।
डाटा, अर्को शब्दमा, मुख्य रूपमा आउँदछ गुगल उपभोक्ता सर्वेक्षण कुन उपभोक्ता प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न खोज ईन्जिनको तरीका हो। खोज परिणामहरूमा देखाइएको अन्तिम रेटिंगहरू प्रायः १००० भन्दा बढी सर्वेक्षणहरूमा आधारित हुन्छन्। अद्यावधिकहरू कम्पनी, उत्पाद वा सेवा परिवर्तनहरूमा समग्र रायको रूपमा निरन्तर कार्यान्वयन पनि गरिन्छ।
उत्पादन रेटिंग्स सुविधा को उपयोग गर्न सक्दछ
उत्पाद सूचीबद्ध विज्ञापनका लागि रेटिंगहरू केवल व्यापारीहरू र विज्ञापनदाताहरू का लागि उपयोगी छन् जो अमेरिकी दुकानदारहरूलाई लक्षित गर्दैछन्। सुविधा सक्षम गर्नका लागि, व्यापारीहरूले तिनीहरूका सबै उत्पादन समीक्षा डाटा साझेदारी गर्न छनौट गर्न सक्नेछन् गुगलका साथ सीधा वा तेस्रो पार्टी एग्रीगेटरको माध्यमबाट। स्वीकृत तेस्रो पक्ष स्रोतहरू समावेश गर्दछ बजारभोइज, एकोमी, Feefo, PowerReviews, Reevoo, पुनर्विक्रेता रेटिंग्स, शपरअप्रप्रोव्ड, TurnTo, प्रमाणित समीक्षा, दृश्यहरू, Yotpo.
व्यापारीहरूले कम्तिमा पनि तीनवटा समीक्षा हुनुपर्दछ योग्य हुन। गुगलले पनि समीक्षा सामग्री साझा गर्ने कि अन्यथा जुलाईको अक्टोबरदेखि अक्टुबर मार्फत सुरु गर्ने निर्णय गर्न व्यापारीहरूलाई पर्याप्त समय दिइरहेको छ। यस अवधिमा सबै उत्पाद लिस्टिंग विज्ञापनहरूमा समीक्षा डाटाको साथ देखाईएको उत्पाद रेटिंग सुविधा हुनेछ। नोभेम्बर आउनुहोस्, उत्पाद रेटिंग मात्र देखाइनेछ यदि व्यापारीले उनीहरूको सम्बन्धित उत्पादनहरूको लागि समीक्षा साझा गर्न छनौट गरे।
कसरी गुगल उत्पादन रेटिंग सक्षम गर्ने
यदि गुगलले तपाईंको उत्पादनहरूको लागि पर्याप्त समीक्षा डाटा भेला गरेको छ भने, रेटिंग्स स्वचालित रूपमा तपाईंको सूचीमा देखा पर्दछ। यदि तपाइँ सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ, तथापि, कि रेटिंग्स अझै अनुग्रह अवधि पछि हुनेछ, साथ साथै आज उत्पादन रेटिंग फार्म पूरा गर्न सक्छ।
यदि तपाईंको व्यवसायले PLAs प्रयोग गर्दछ भने, यो एक अवसर लिने अवसर हो। तपाईंको सूचीबद्धसँग जोडिएको राम्रो मूल्या्कन एक किसिमको तरीका हो तिनीहरूलाई ध्यान दिन र खरीददारहरूलाई उनीहरूको खरीद निर्णयहरूमा सहयोग गर्न। खराब रेटिंग्स, एक तर्फ, तपाइँका उत्पादनहरूबाट टाढा ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ। त्यसोभए दिमागमा राख्नुहोस् कि समयसँगै रेटिंग्स पनि परिवर्तन हुन्छन्। लगातार शीर्षमा रहनको लागि, उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने र केवल उत्तम उत्पादनहरूको भन्दा राम्रो व्यापार गर्नु राम्रो तरीका छैन। Time-तारा रेटिंगका लागि लक्ष्य राख्नुहोस् प्रत्येक पटक र तपाईंको व्यवसायको लागि मात्र दिशा अप छ।
टैग: AdWordsएडवर्ड्स व्यापारीहरूएडवर्ड्स उत्पाद सूचीकरणबजारभोइजएकोमीFeefogoogle adwordsगुगल उत्पाद सूचीनगुगल उत्पाद रेटिंग्सgoogle shoppingPowerReviewsउत्पाद सूचीनउत्पाद सूची विज्ञापनउत्पाद सूचीकरणउत्पाद रेटिंग्सReevooपुनर्विक्रेता रेटिंग्सशपरअप्रप्रोव्डTurnToप्रमाणित समीक्षादृश्यहरूYotpo
सीईओ र को संस्थापकको रूपमा क्रिएटिभ डिजिटल, स्कट एक सहज व्यावसायिक संगठन मा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न डिजिटल सबै चीजहरु को लागी आफ्नो उद्यमशीलता, रचनात्मकता र उत्कटता प्रयोग गर्दछ।
कसरी एक A / B परीक्षण ChangeAgain साथ चलाउने